သင်ချစ်မြတ်နိုးရမယ့် Telegram အတွက် Bots! | Androidsis
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်က Androdisisvideo YouTube ရုပ်သံလိုင်း၌ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏စိတ်ဝင်စားမှုအဆင့်ကိုဖော်ပြသောကြောင့် Androidsis Blog တွင်သင်နှင့်သင်အားလုံးကိုမျှဝေရန်တာဝန်ရှိသည်။
ငါဘယ်လိုတင်ပြရမလဲ3Telegram အတွက် Bots တွေကမင်းတို့ကိုအရမ်းချစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကအရမ်းအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူး.
ငါသည်သင်တို့ကိုဤလိုင်းများအထက်ရုံထားခဲ့ကြသောဗီဒီယိုထဲမှာအတူတကွပို့စ်၏ခေါင်းစဉ်အတွက်, ငါသည်သင်တို့ကိုတ ဦး တည်းအားဖြင့်တ ဦး တည်းရှင်းပြ, ဤအဘယ်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း ကြေးနန်းအတွက်သုံး botအဖြစ်ကောင်းစွာသူတို့ကို၏မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှု။
စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုပင်အသုံးပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့ Android တွင်သာမက Windows တွင်ထည့်သွင်းလိုသောမည်သည့်ဖိုင်၊ application သို့မဟုတ် executable ကိုမဆိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် manual firewall တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သော sensational tool တစ်ခုဖြစ်သည်။.
1 Gifmsgbot, trendig ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သော gifs သို့စာသားထည့်ပါ
2 APK Manager Bot ကို
3 စုစုပေါင်း Scan Bot ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး
Gifmsgbot, trendig ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သော gifs သို့စာသားထည့်ပါ
သင့်အတွက်အချိန်များစွာပေးနိုင်မည့် bot တစ်လုံး ခေါင်းစဉ်များခေါင်းစဉ်များ gifs သို့သင်၏ကိုယ်ပိုင်စာသားထည့်ခြင်း လူမှုရေးကွန်ရက်များ၌နေ့စဉ်ဖြန့်ဝေသည်။
အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည် ၎င်းသည် bot ၏ကိုယ်ပိုင် chat မှအသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်အခြား chats မှ inline mode တွင်အသုံးပြုနိုင်သည် bot ကိုယ်တိုင်၏အမည်ကိုစတင်ရေးသားခြင်းဖြင့်၊ @gifmsgbot သင်၏ GIF တွင်သင်ထည့်ချင်သောစာသားကိုထည့်ပါ။
ဒီနေရာတွင်တစ် ဦး ငါစွန့်ခွာ Telegram အတွက်ဤရိုးရှင်းသော bot ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော GIF ကောင်းသည်.
ဒီမှာတိုက်ရိုက်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် bot ကိုသုံးပါ။
APK Manager Bot ကို
ပူးတွဲပါဗွီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်အကြံပြုသောဒုတိယ bot သည် apk format ဖြင့် application များကိုရှာဖွေရန်နှင့် download ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီလိမ့်မည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်၊ သင်ရှာဖွေနေသော application ၏အမည်နှင့်စာတစ်စောင်ပို့ခြင်းဖြင့် bot ကိုယ်တိုင်နှင့် chat လုပ်ရန်လုံလောက်သောကြောင့်၎င်းကို apk format ဖြင့်သင်ရှာရန်မလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏ Google Play Store တွင်သို့မဟုတ်သင်၏တိုင်းပြည်တွင်ကန့်သတ်ထားသောကြောင့်သို့မဟုတ်သင်၏ Android application အတွက်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ထားသည့် Huawei ကဲ့သို့သော terminal တစ်ခုရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင် bot သို့ဝင်ရောက်ပြီး၎င်း link ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက်စတင်နိုင်သည်။
စုစုပေါင်း Scan Bot ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး
ဒါကသံသယမရှိဘဲဖြစ်ပါတယ် ယနေ့ငါ Telegram တွင် run ရန်သင့်ကိုခေါ်ဆောင်လာသည့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး BotTelegram သည်ပလက်ဖောင်းပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ခရီးဆောင်နှင့် desktop လည်ပတ်ရေးစနစ်များအတွက်ဖောက်သည်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် Addware, Malware နှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်ဖိုင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးမှကာကွယ်ရန်၎င်းကိုလက်စွဲစာအုပ် Firewall အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။.
asi သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖိုင်ကို bot ၏ကိုယ်ပိုင်ချက်တင်သို့ပို့ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်၎င်းသည်စာရွက်စာတမ်း၊ compressed ဖိုင်၊ Android အတွက် executable file လား apk, Windows .exe အတွက် executable file လား၊ Tar.gz, PDF, DMG ဖိုင်များလား၊ သင့်ဆီပို့လိုက်သောမည်သည့်ဖိုင်မဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကွဲပြားခြားနားသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအင်ဂျင် ၇၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ Virustotal.com ဝက်ဘ်ဆိုက်မှကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်ရိုက်အစီရင်ခံစာကိုသုံးသပ်ရန်။
အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ဇာစ်မြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မသိသောပေးပို့သူများကိုလက်ခံသည့်အခါသေချာစေရန်နည်းလမ်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကို bot ရဲ့ chat ဆီကိုပူးတွဲဖိုင်အနေနဲ့ပို့ရမယ်။ အကယ်၍ ကူးစက်ခံထားရတဲ့ဖိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါတို့စက်ကိုမကူးစက်အောင်အရင်ဆုံးမဖွင့်ဘဲပြောရမယ်။
bot ကို Access နှင့်ဤ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တိုက်ရိုက်စတင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင်ချစ်မြတ်နိုးရမယ့် Telegram အတွက်3bot !!